Zere ka ndị jidere gị site na ndị mmepe | Martech Zone
Izu ụka a ka m malitere mkparịta ụka na onye na-ese ihe na mpaghara nke na-enyere onye isi ya aka na njikwa nke ngwa ngwa weebụ ole na ole onye isi ya nwere.
Mkparịta ụka a gbanwere na ụfọdụ ịpụ na-aga n'ihu na ịkwụ ụgwọ ụgwọ mmepe kwa izu na-ahụghị ọganihu ọ bụla na onye nrụpụta ha na ya rụkọ ọrụ. Ugbu a, onye nrụpụta ahụ chọrọ ịkwụ ha ụgwọ ego ọzọ iji mezue ọrụ ahụ yana kwa mmezi kwa izu iji kpuchie arịrịọ ndị ọzọ. Ọ na-akawanye njọ.
Mmepụta bufere ngalaba aha ka o wee jikwaa ha. Onye nrụpụta na-akwadokwa ngwa ahụ na akaụntụ nnabata ya. Na nkenke, onye nrụpụta na-ejigide ha ugbu a.
Obi dị m ụtọ na nwanyị m na-arụ ọrụ na-achọ ịnweta nchịkwa n'oge gara aga iji dezie ụfọdụ faịlụ ndebiri maka saịtị ahụ. Onye nrụpụta ahụ nwere ike inye ya ohere pere mpe mana ọ kwadoghị ya. Ọ (lazily) nyere ya ntinye nchịkwa na saịtị ahụ. Tonight m ji na ohere ndabere niile nke koodu maka saịtị. Achọpụtakwara m ụdị sọftụwia njikwa ọ na-eji wee mee ka m banye na nchekwa data nchekwa ebe m nwere ike mbupụ data data na ngwa tebụl. Kwuru.
Onye nwe ya na-eme atụmatụ ịkwaga saịtị ndị ahụ na ngalaba aha ọhụrụ ozugbo mmepe mechara. Nke ahụ buru ibu n'ihi na ọ pụtara na ngalaba ndị dị ugbu a nwere ike ịnwụ ma ọ bụrụ na enwere iwe iwe n'etiti ndị nrụpụta na ụlọ ọrụ ahụ. Ahụla m nke a na mbụ.
Tipsfọdụ ndụmọdụ ma ọ bụrụ na ị ga-enweta ndị otu mmepe mmepe
Debanye aha ngalaba gị na aha ụlọ ọrụ gị. Ọ bụghị ihe ọjọọ inwe gị Mmepụta dị ka a nka na ụzụ Kpọtụrụ na akaụntụ, ma mgbe nyefee nwe nke ngalaba na onye ọ bụla na-abụghị ụlọ ọrụ gị.
Lelee Ngwa gị ma ọ bụ Saịtị gị
Ọ dị mma na onye nrụpụta gị nwere ụlọ ọrụ nnabata ma nwee ike ịnabata gị na saịtị, mana emela ya. Kama, jụọ aro ya maka ebe a ga-etinye ngwa ahụ. Ọ bụ eziokwu na ndị mmepe ga-amata ngwanrọ njikwa, nsụgharị, na ọnọdụ nke ihe onwunwe yana nke ahụ nwere ike inyere ngwaahịa gị aka mechaa ngwa ngwa. Nke ahụ kwuru, n'agbanyeghị, nwee akaụntụ nnabata ma tinye onye nrụpụta gị nbanye ya na ohere ya. N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike ịdọrọ plọg ahụ mgbe ọ bụla ịchọrọ.
Echekwala na inwere koodu ahụ, tinye ya na ederede. Ọ bụrụ n’ịchọghị ka onye nrụpụta gị jiri ihe ngwọta ị kwụrụ ya kwalite ebe ọzọ, ị ga-ekpebi na n’oge nkwekọrịta ahụ. Enweela m ihe ngwọta n'ụzọ a mana m mepụtara ha ebe m jidere ikike na koodu ahụ. N'okwu ikpe nke ikpeazụ, ekwere m ọnụ ahịa nke ngwa ahụ ka obere wee nwee ike ịkwado ụlọ ọrụ inye m ikike. Ọ bụrụ n’icheghị onye nrụpụta gị jiri koodu gị ebe ọzọ, ị gaghị akwụ ụgwọ ego kachasị elu!
Nweta echiche nke abụọ!
Ọ naghị ewute m mgbe ndị mmadụ gwara m na ha na-akwụ ọnụ ma ọ bụ na-ajụ ndị ọkachamara ndị ọzọ ajụjụ. N'ezie, ana m akwado ya!
Isi okwu bụ na ị na-akwụ ụgwọ maka ikike onye nrụpụta gị mana ị ga - ejigide njikwa na ikike ị nwere. Ọ bụ nke gị. Ọ bụ gị nyekwara ego n'ime ya, ị tinyere ndụ gị n'ihe egwu na uru ọ bara maka ya… na ọ bụ gị kwesịrị idowe ya. Enwere ike dochie ndị mmepe na nke ahụ agaghị etinye ngwa gị, ma ọ bụ ka njọ - azụmahịa gị, n'ihe egwu.
Tags: Mgbasa OziBluetoothalgorithm nke googleekwentị mkpanaakaprwebederede ederede ahiatextingwordpress sms mwekota
Leveraging Nchịkọta Weebụ
Mee 13, 2008 na 5: 04 PM
Abụ m onye nrụpụta ngwa weebụ ma ekwenyere m n'ọtụtụ isi gị (ikekwe niile) mana ọ ga-amasị m ịkọwapụta na # 3.
Ntughari ahia nke saịtị ma obu ngwa nke erere nye ulo oru ozo (ma obu onye ojoo karie) abughi ihe kwesiri ekwesi ma gha ekwenye ya dika ihe anaghi anabata na nkwekorita gi. Agbanyeghị, emepepụtarala m ụzọ ọhụụ maka nsogbu ndị nkịtị mgbe m na-arụ ọrụ nke onye ahịa nke enweghị ihe ọ bụla jikọrọ ya na biz ma ọ bụ na ọ na-anọchite akụkụ dị oke mkpa nke mkpokọta ahụ.
Onye ahịa chọrọ ọkwa peeji nke ya na njikwa ọkwa njikwa ejikọtara na ọrụ ndị ọrụ. Ọrụ “nke igbe” maka ASP.Net na-enye ikikere ọkwa folda. N'ihi ya, m gbatịrịrị ikike ndị nwe obodo maka. Net ma nyefee ya ngwọta dị ka akụkụ nke ngwa weebụ zuru oke.
Ekwenyere m na ha nwere ikike koodu niile (dị ka ekwuru na nkwekọrịta ahụ) mana enwere m mmetụta ziri ezi n'iji otu usoro na akara nke koodu iji mezuo ndọtị a na ọrụ ndị ga-eme n'ọdịnihu.
Emere m nke a mgbe ụlọ ọrụ na-ahụ maka ndụmọdụ na-akọ m. Ndi ụlọ ọrụ na-agba izu ga-enwe ikike n'uche gị ịlaghachi ma detuo azịza ahụ, na-ere ya dị ka nke ha?
Aug 18, 2011 na 6:24 PM
Echere m na anyị kwenyere. Isi okwu m na nke a bụ iji hụ na ị nwere koodu ahụ ma nwee ike iji ọnụ ụzọ ọpụpụ. Ọ bụrụ na onye nrụpụta gị na - achịkọta koodu maka gị ma na - agbanye ya na saịtị gị - ị nweghị koodu ahụ. Ahụwo m ka nke a mee na ihe niile sitere na eserese, Flash, .NET, Java… ihe ọ bụla chọrọ faịlụ isi na ebute.
Mee 13, 2008 na 5: 53 PM
M na-ahụ ebe ị si abịa na mgbe m na-ekwenyeghị na ihe niile 100% (Enwere m ọdụ), ụlọ ọrụ kwesịrị iburu nke a n'uche.
1. KWES ABR AB KWES .R.. Enweghi ike imesi ike nke a. Arụrụ m ọrụ maka obere ụlọ ọrụ mere nke a, enwekwara m nkụda mmụọ maka itinye aka na ya. Obi dị m ụtọ na m nwere ike ịpụ ebe ahụ. Ndị ahịa kwesiri ijide njikwa ha. Ọ bụrụ na ha nwere onye maara nke a zuru oke, enyela onye nrụpụta ohere na nke a. Ọ bụrụ na ọ bụghị, gbaa mbọ hụ na onye nrụpụta nwere ụzọ ị ga-esi gbanwee ama / bufee ngalaba ahụ site na ntanetị reseller na ụdị ọ bụla ma ọ dịkarịa ala.
2. Ekwere m na nke a kwenyere na nke a mana ọ dabere na ọnọdụ ahụ. Ọ bụrụ na ị na-ebunye ngwa ngwa PHP dị mfe ma chọọ nnabata ọnụ ala, n'ụzọ ọ bụla, nweta akaụntụ LunarPages ma ọ bụ DreamHost ma ọ bụ ihe ma tụfuo ya. Nye onye mmepe ohere. Agbanyeghị, ọnụahịa ejikọtara ọnụ ala nwere ihe ọghọm… ọkachasị maka ihe buru ibu. Ma ọ bụrụ na i buru ibu iji chegbu onwe gị banyere nke ahụ, ị ​​ga-enwe onye ọrụ aka nke ndị ọrụ nwere ike ịnagide ya. Ọtụtụ n'ime ya doro anya banyere ntụkwasị obi. O doro anya na hel tinye ihe na nkwekọrịta ma ọ bụrụ na ị nwere ike banyere ụdị ihe a (mgbochi na ndị dị otú ahụ). Nchịkọta nke atọ dị mma ma ọ bụrụ na onye nrụpụta achọghị ịme ihe ọ bụla. M kwetara na m dọwara adọka n'ihi na ọ bụ n'ezie ihe ọnọdụ. Ọ dabere na oke saịtị ahụ, usoro nke teknụzụ eji. Ọ bụrụ na ọ ga-abụ nnukwu, na-atụle itinye mmadụ n’ọrụ. Ọ bụghị mgbe niile nhọrọ, mana nchekwa maka nnukwu ihe.
3. Nke a bụkwa ihe ụlọ ọrụ mbụ m mere. Nwere ike ịhapụ, ha ga-enye gị HTML, onyonyo wdg…. ma ọ dịghị koodu. Koodu bụ ọrụ mgbazinye ego n'ụzọ bụ isi. N'ikwu ya, enwere ma nwekwaa ya. Emeela m ọrịre na-enweghị ahịa. Ihu ọma, m kwesịrị inwe ike iwerekwa ọzọ m mejupụtara. Enweghị m nsogbu ọ bụla na onye ahịa nwere ya, na-eme ihe ha chọrọ na ya na onye ọzọ na-arụ ọrụ na ya ala ...
4. Mgbe niile. Mgbe niile. Mgbe niile.
Mee 18, 2008 na 5: 48 PM
Ọmarịcha post… mere nke ọma ọ bụ ezie na anaghị m ekwenye otu ihe (# 2):
"Ọ dị oke mma na onye nrụpụta gị nwere ụlọ ọrụ nnabata ma nwee ike ịnabata saịtị gị maka gị, mana emela ya."
Ọ bụ ezie na m ghọtara mgbagha dị na nke a, ọ nwere ike ịba uru na ụfọdụ iji nye iwu ka akwadoro ọrụ gị ebe ọzọ. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ na-emepe emepe saịtị ma ọ bụ ngwa gị nwere ikpo okwu nnabata ha na-ahọrọ iji, ọ ga - abụrịrị ọfụma ma rụpụta ọrụ ka ha wee jiri ya.
Ọzọkwa, site na nkà ihe ọmụma, ọ bụrụ na ị jụ iji onye na-eweta ihe nnabata gị na-eme ihe n'ihi na ị chọghị "ijide gị", mgbe ahụ nke a na - eme ka enweghị ntụkwasị obi site na mbido. Ọ bụrụ n’ezie na ị tụkwasịghị onye nrụpụta gị obi ịnabata ha, mgbe ahụ ị chọrọ n’ezie iso ha rụọ ọrụ na mbu?
Amaara m na ọtụtụ akụkọ ụjọ dị adị banyere ụdị ọnọdụ a, mana n'ozuzu m ga-atụ aro ka ị lekwasị anya n'ịchọpụta onye nrụpụta nke ị tụkwasịrị obi. Can nwere ike iji Bochum nke onye nrụpụta gị wee chebe onwe gị site na ịrịọ ịnweta njikwa na ịme nkwado gị.
Ọzọ, ezi post na ozi bara ezigbo uru.
Mee 19, 2008 na 8: 56 AM
Ọ nwere ike ịdị ka okwu ntụkwasị obi mana echeghị m na ọ bụ - ọ bụ okwu njikwa na njikwa. Ọ bụrụ n ’ị ga-etinye ego dị ukwuu na mmepe websaịtị gị, mgbe ahụ ị ga-ejide n’aka na ị nwere ike ijikwa gburugburu ya.
Ihe na-eme na azụmaahịa nke na-emebi mmekọrịta ma ọ dịghị ha mkpa ịbụ ndị na-adịghị mma. Ikekwe onye nrụpụta / ụlọ ọrụ gị na-enweta nnukwu onye ahịa ma enweghị ike inye gị oge ahụ. Ikekwe ha na-agbanwe ebumnuche azụmahịa. Mgbe ụfọdụ ụlọ ọrụ ha na-eweta ụlọ ọrụ nwere ike ịnwe nsogbu.
M na-akwado na ị na-achịkwa ma na-ahụ maka Bochum gị ka ị nwee ike ịdabere na onye nrụpụta gị maka ihe ọ dị mma - ịzụlite!
Enwere m ekele ịghaghachi azụ, Michael.
Mu onwem bukwa onye weputara na ngwa web, echekwara m na ichoro ntu ahu n’isi. Thoughtsfọdụ echiche:
Echere m na ọtụtụ mmadụ niile ga-ekwenye (ma dabere na ihe ndị dị n'okpuru) # 1 bụ kpam kpam. Ya adịla mgbe ị ga-eme ya. Mgbe. N'okpuru ọnọdụ ọ bụla.
Enwere m ihe dị iche na # 2 karịa ikekwe ụfọdụ n'ime ndị mmepe ibe m: anyị jụrụ ịnabata ngwaahịa ikpeazụ maka ndị ahịa anyị (n'ezie, anyị na-anabata ihe nnwale maka ndị ahịa iji nwalee ịkwọ ngwaahịa n'oge mmepe). Obi dị anyị ụtọ inyere ndị ahịa aka idozi ya ma ọ bụ chọta ndị na-eweta ọrụ. Naanị anyị achọghị ịbanye na azụmaahịa Bochum. Ọ bụrụ na nke ahụ pụtara ịtụgharị ọrụ, yabụ ka ọ dị. Enwere ọtụtụ nnukwu ụlọ ọrụ nnabata ma ọ bụ ụlọ ọrụ akụrụngwa n'ebe ahụ karịa ka ha nwere ike ịnye ọrụ a na ọnụahịa dị ọnụ ala. Anyị na-akwado ọrụ nke ọrụ anyị, ma ga-eme ihe ọ bụla anyị nwere ike ime iji nyere aka ịnabata ya, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na onye ahịa ahụ gbanwere ndị na-eweta nnabata ọtụtụ afọ n'okporo ụzọ.
Maka # 3, ndị ahịa anyị na-enweta koodu isi mmalite nke ngwaahịa ikpeazụ na otu ọdụm: Maka ngwaahịa ndị ọzọ ejiri mee ihe na ngwọta (dị ka njikwa weebụ site na Telerik ma ọ bụ Component One), anyị nwere ike inye onye ahịa ahụ dll maka onye njikwa nke atọ (kwuo grid). Nkwekọrịta ikikere anyị na ụlọ ọrụ ndị ọzọ ahụ (nke anyị na-enye ndị ahịa ya) gbochiri anyị ịkesa koodu isi maka ụdị njikwa ahụ, n'ihi na ọ bụ ihe ọgụgụ isi nke ndị ọzọ, ọ bụghị nke anyị. Ojiji nke ụdị ngwaahịa ndị a na-azọpụta oge mmepe maka onye ahịa ma dị ọnụ ala karịa iwulite otu ọrụ ahụ site na ncha. Anyị nọ n’ihu maka amụma a tupu arụ ọrụ ọ bụla. N'ezie, ọ bụrụ na onye ahịa ahụ chọrọ ịkwụ ụgwọ maka mmepe njikwa omenala (kama iji ngwaahịa arụpụtara tupu nke atọ) anyị na-enye koodu isi maka njikwa omenala yana ihe ọ bụla ọzọ.
Mgbe a bịara n'iji koodu mee ihe, anyị na-ebute ụzọ maka eziokwu ahụ na anyị nwere ike jighachi akụkụ nke koodu ahụ belụsọ ma e mepụtara ya nke ọma maka iji ndị ahịa mee ihe (kwuo maka usoro azụmaahịa azụmaahịa) tupu arụ ọrụ ọ bụla. Ọ bụrụ na onye ahịa ahụ chọrọ inwe koodu pụrụ iche mepụtara n'ezie, nke ahụ dịịrị ha.
Dị ka ndị ọzọ kwuru, # 4 na-atụ aro ya mgbe niile. Mgbe niile!